Resipeo miendrika katsaka vita an-trano (vonona ao anatin'ny 40 minitra!) - Fomba Fanamboarana
nonon'akoho tsy misy hoditra tsy misy bonbon miaraka amina henan-taolan-tehezana
ny fomba fahandro taolan-tehezana mangatsiaka amin'ny grill
paiso mofomamy paiso mampiasa paiso mangatsiaka
Resipe-mofo vita amin'ny katsaka
Mofo-katsaka ao an-trano malefaka sy marefo miaraka amina fofona mamy fotsiny ary mora ny manamboatra azy.
Izy io no mofo tonga lafatra aroso miaraka amin'ny lasopy sy legioma ary cabisy tianao indrindra! Mazava, malefaka ary mando, ity fomba fahandro ity dia mety tsara amin'ny fanobohana, fampidinana na fametahana dibera. Ny fanaovana mofo katsaka amin'ny voalohany dia mora fantatro fa ho tianao izany!
Ahoana ny fomba fanaovana mofo-katsaka
Araka izay tiako zavatra tsara Mofomamy Cheddar , misy zavatra vitsivitsy toy ny kilasika tsotra asitrika ao anaty lovia iray Crock Pot Chili !
Whisk akora maina ao anaty lovia. Afangaro ao anaty lovia misaraka ny akora mando.
manambatra ny ny roa mandra-pahatongan'ny mando.
koa manendasa mandra-fluffy.
Torohevitra fanaovana mofo: Ity fomba fahandro ity dia mampiasa dibera ho an'ny tsiro manankarena ary koa hahitana fiakarana tsara. Tsy misy dibera? Tsisy olana!
Manaova anao manokana mpisolo dibera amin'ny alàlan'ny fametahana ranom-boasarimakirana 1 na vinaigitra fotsy ao anaty kaopy fandrefesana 1 kaopy. Fenoy ronono ary avelao hipetraka 5 minitra.
Ity fomba fahandro mofom-bary ity dia manamboatra mofo katsaka maivana be sy malefaka miaraka amin'ny mamy kely fotsiny. Indraindray aho manampy kaopy na katsaka katsaka raha eo am-pelatanako (na am-bifotsy na alefa na aisy / aondraka).
Toy ny fomba fahandro mofo haingana indrindra (toy ny Mofo Akondro ) alao antoka fa afangaro ny adina mandra-pahatonga azy ho lena. Ny fihoaram-pefy dia mety hahatonga mofo maina sy maina.
Inona no mandeha amin'ny mofo katsaka?
Mazava ho azy fa manolotra mofo katsaka miaraka amin'ny lasopy sy laoka ary ny tianay indrindra izahay fomba fahandro sakay . Tena tsara miaraka tsaramaso , anana , na koa mba hanolo ny sasany amin'ny mofo ankafizinay Stuffing Recipe .
Ny mofo katsaka dia tsara asiana dibera tsotra (na dibera tantely ) fa azonao apetaka amin'ny jam na jellies koa io!
Ahoana ny fomba hitahirizana mofo katsaka
Ny mofo jiro dia mofo matsiro sy mando ary tokony hotehirizina ao anaty fitoeran-drano mihidy mafy amin'ny mari-pana (na ao anaty vata fampangatsiahana).
Azonao atao tokoa ny mangatsiaka ny mofo katsaka. Hetezo fotsiny ho efamira ary apetraho ao anaty fitoeran-drano voaisy tombo-kase. Raha mametraka ny mofo katsaka ianao, dia apetraho eo anelanelan'ny sosona ny taratasy hodi-biby mba tsy hipetaka. Avelao izy hipetraka amin'ny hafanan'ny efitrano mandritra ny 30 minitra.
Raha te-hamerina azy ianao dia aforeto amin'ny foil ary apetaho amin'ny lafaoro mandritra ny 15 minitra amin'ny 350 ° F.
Resipe-katsaka betsaka kokoa no ho tianao
Casserole katsaka - Ankafizin'ny fialantsasatra!
Voanjo voatavo namboarina
Chowder katsaka Cooker miadana - Mora!
Salady Frito Corn
Dip-katsaka Meksikana - sakafo matsiro be!
Ham sy Chowder katsaka - Sakafo fampiononana!
4.72FromEfatra Dimyvato FAMERENANAResipeo
Resipeo mora mahandro
Fotoana fanomanana5 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo35 minitra Fotoana manontolo40 minitra Fanompoana9 servings MpanoratraHolly Nilsson Maivana, malefaka ary matsiro ity fomba fahandro mofo tsotra ity! pirinty Pin
▢1 kapoaka koba tsara toto
▢1 kapoaka katsaka
▢¼ kapoaka siramamy
▢4 sotrokely leviora
▢1 kapoaka dibera
▢⅓ kapoaka dibera tain
Araraoty miaraka amin'ny lafarinina, katsaka, siramamy, vovo-mofo ary sira.
Ao anaty vilia iray misaraka dia arotsaho ny atody, dibera ary dibera afangaro.
Atambatra ireo akora lena sy maina mandra-pahatonga azy ho afangaro.
Aparitaho anaty lapoaly 8x8 voahosotra ary endaso mandritra ny 30-35 minitra na mandra-pivoakan'ny paompy madio.
Azo alain-tanana: ampio voan-katsaka 1 kaopy ny adiny alohan'ny handrahoana azy.
Kaloria:232,Karbohidraty:31h,Proteinina:5h,Tavy:9h,Tavy voky:5h,Cholesterol:57levitra,Sodium:233levitra,Potasioma:300levitra,Fibre:rOAh,Sugar:7h,Vitamina A:305IU,Kalsioma:117levitra,Vy:1.5levitra
ohatrinona ny kapoaky ny vary
Teny lakilefomba fahandro ny katsaka tsara indrindra, ny mofo katsaka, ny fomba fahandro ny mofo katsaka, ny katsaka, ny fomba fahandro ny katsaka, ny fomba fanaovana mofo katsaka Mazava ho azyMofo, lovia eo anilany masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Resipeo namboarina tamin'ny Mofomamy Corned Cheddar .